Serivisy sy mpamatsy tsara indrindra VIVIVE | Hongyu
Viveve, Inc., ny orinasan'ny Viveve Medical, Inc., dia orinasa ara-pahasalamana akaiky ho an'ny vehivavy monina any Englewood, Colorado. Viveve dia manolo-tena handroso vahaolana vaovao hanatsarana ny fiainam-behivavy amin'ny ankapobeny sy ny kalitaon'ny fiainana. Ny orinasa dia mifantoka amin'ny varotra varotra fitaovana revolisionera, tsy fandidiana, tsy manara-penitra izay manavao ny collagen ary mamerina amin'ny laoniny ny fivaviana. Ny Viveve® System izay misy patanty iraisampirenena dia mampiditra ny teknolojia Monopolar Radiofrequency (CMRF) miompana amin'ny Crypto mba hanaterana fanamafisana volumetrika raha toa ka mangatsiaka tsara ny vatan'ny velarana mba hiteraka neocollagenesis ao anaty birao tokana. Any Etazonia, ny Viveve System dia nesorin'ny Food and Drug Administration (FDA) hampiasaina amin'ny fomba fandidiana amin'ny ankapobeny ho an'ny electrocoagulation sy hemostasis. Ny fankatoavana ara-dalàna sy ny fahazoan-dàlana iraisam-pirenena dia voaray noho ny fahamendrehana amin'ny fivaviana sy / na ny fanatsarana ny famantarana ny firaisana ara-nofo any amin'ny firenena maherin'ny 50.
Viveve dia manohy mandroso ny fandaharam-pampandrosoana klinika amin'ny tsy faharetan'ny urinary stress (SUI). Araka ny notaterina tamin'ny Desambra 2020, nankatoavin'ny FDA ny fanovana ny protokolon'ny fitsarana PURSUIT pivotal amerikana natao hanamafisana ny fandinihana ankapobeny sy ny mety ahatongavany any amin'ny laharana farany mahomby. Ny fiovan'ny fandinihana, anisan'izany ny fitomboan'ny haben'ny fitsapana ary ny mason-tsivana voafantina henjana kokoa dia vokatry ny torolàlana avy amin'ny Birao Mpanolo-tsaina klinika an'i Viveve rehefa nandinika ny vokatra tsara azo avy amin'ny fahaizan'ny SUI azo tanterahina sy ny fanadihadiana mialoha. Viveve dia nahazo ny fankatoavan'ny FDA ny fangatahana Exemption Investigational Device Exemption (IDE) hitarika ny fitsarana PURSUIT multicenter, mandeha an-jambany, jamba indroa ary voafehin'ny hosoka noho ny fanatsarana ny SUI amin'ny vehivavy tamin'ny Jolay 2020 ary ny fankatoavan'ny FDA ny fanovana nangatiny ho an'ny protokol IDE ho notaterina tamin'ny 10 Desambra 2020. Notaterina tamin'ny 21 Janoary 2021 ny fanombohana ny fitsarana ary efa mandeha ny fisoratana anarana. Raha miabo, ny valin'ny fitsapana PURSUIT dia mety hanohana famantarana SUI vaovao any Etazonia
IN THThe Viveve System dia manolotra fitsaboana mandritra ny fotoana maharitra mba hiteraka kolagenana sy hamerenana amin'ny laoniny ny sela. Ny maody roa VIVEVE FITEHIRIZAM-BOKIN'NY BAIBOLY ARY MIARO NY SURFACE REHEFA manafana ny fitsapana lalina kokoa. Ny fitsaboana Viveve dia sady azo antoka no mandaitra.
Vokatra INCONTROL dia manamafy ny hozatry ny taolam-paty ary mampitony ny hozatra detrusor amin'ny alàlan'ny electrostimulation patanty miaraka amina ambaratonga avo sy ambany amin'ny fanentanana mba hitsaboana ny tsy fihinanan'ny urinary sy ny fecal. Attain dia fitaovana nodiovin'ny FDA.
Ny fitsaboana Viveve
NY FITSABOANA VIVEVE dia natolotra VIA THE VIVEVE SYSTEM, fitaovana radiofrequency milamina misy krônônena izay manangana collagen voajanahary hanatsarana ny fahamendrehan'ny vivavikely ary hanohanana ny uretra. Natao io rafitra io hitsaboana ireo vehivavy tratry ny tsy fihinanan'ny urin - mivoaka ny urine rehefa mihomehy, mikohaka, mievina na mitsambikina; fihenan'ny firaisana ara-nofo sy ny laxity amin'ny fivaviana - ny fanitarana sy ny fanitarana ny vatan'ny fivaviana aorian'ny fiterahana, miaraka amin'ny taona na noho ny fiovan'ny hormonina. Ny fanadihadiana dia naneho valiny maharitra hatramin'ny 12 volana.EC
Teo aloha: fahazoan-dàlana